I-China i-408 yamanani ama-8 ama-8 oMbane wokuBala we-Electromechanical kunye noMthengisi | Wenchang
Intshayelelo: Isetyenziselwa ukurekhoda amaxesha okuqokelelwa kweempawu zombane, ngaphandle kokusetha kwakhona, njengokubala kwezibalo, ukubala ngokujikeleza ngomatshini, ukubala imali, ukubala kwenani lokuhamba kunye nokubalwa kokukhethwa kwamaqela njl.njl. , oomatshini kunye nekhabhathi yevolthi ephezulu njl.
Isetyenziselwa ukurekhoda amaxesha okuqokelelwa kweempawu zombane, ngaphandle kokusetha kwakhona, njengokubala kwezibalo, ukubala ngokujikeleza ngomatshini, ukubala imali, ukubala kwemali yokuhamba kunye nokubalwa kokukhethwa kweqela njl.njl. ombane aphezulu ombane njl
H x W: 4 x 1.8mm
Ukufuma uhlobo ezinxulumene ukufuma
DC12 ～ 220V (iinkcukacha ezahlukeneyo kunye neemodeli); AC24 ～ 240V (iinkcukacha ezahlukeneyo kunye neemodeli)
AC: ≤10times / sec ； DC ： ≤20times / sec
I-AC: 4.0VA; Inkcazo: DC DC
Edlulileyo: Ikhawuntari yokulinganisa ubude beJC106
Okulandelayo: I-878 enamanani ama-8 e-Electromechanical Totaliser
JD6_III iinombolo ezi-6 zoMbane oChongiweyo weC ...
I-DL527B -iidigithi ze-Electromechanical Totaliser
I-ZD404 3-in-1 Counter yoMbane
I-878 enamanani ama-8 e-Electromechanical Totaliser